IGalicia ifuna ukukhokela kwimveliso yamandla ahlaziyekayo eSpain | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IGalicia ifuna ukukhokela kwimveliso yamandla ahlaziyekayo eSpain
UTomàs Bigordà | | IBiomass, Amandla omoya, Amandla ombane, amandla ombane, Umoya ovuselelekayo
Umnumzana Alberto Núñez Feijóo, umongameli weXunta uqinisekile iGalicia, "mhlawumbi ikunye neCastilla y León", iya kuphinda ikhokele ukuveliswa kwamandla ahlaziyekayo kule minyaka izayo.
Okwangoku, ngokubhekisele kwicandelo lomoya, imephu yendlela yaseXunta de Galicia icinga ukuba ngo-2020 Zisebenza kufutshane ne-4GW yamandla.
Injongo kukufikelela kwi-megawatts ezingama-6.000 kule minyaka ilishumi izayo, enkosi kumaziko abonelelwa nguMthetho omtsha woPhumezo lweShishini. NgokweXunta, iya kuthetha ukuba ngaphambi nasemva kubo bonke abo bafuna ukutyala imali eGalicia, kwicandelo lezinto ezinokuhlaziywa kodwa nakwamanye amacandelo aqhuba kakuhle oqoqosho lwethu.
Phakathi kwezinto ezintsha eziboniswe ngulo mthetho, umongameli wengingqi wagxininisa ukuba umisela inani lokwahlula ezo projekthi zorhwebo zithathwa njengezo umdla okhethekileyo eluntwini. Ngale ndlela, kwenziwa iinzame zokukhuthaza ukulawulwa kolawulo ekusebenzeni.
Enyanisweni, Iipaki ezili-18 sele zibhengeziwe njengeeprojekthi ezinomdla okhethekileyo, kuzo ezili-12 esele zigunyazisiwe. Ekugqibeleni, sifuna ukuba iinkampani zibheje eGalicia, wongeze umongameli wengingqi, ukongeza ekuqaqambiseni oko Amandla ahlaziyekayo babonelela phantse iipesenti ezingama-90 zombane osetyenziswe ngamaGalician, ngelixa bemele i-4,3% ye-GDP yommandla.
Enye into entsha eyaziswa nguMthetho wezoShishino yayikukuyilwa kwinyanga yokugqibela ka-Okthobha kwirejista yomoya yaseGalician, apho isicelo sokubulawa kwee-megawatts ezili-1,126 besele sibhalisiwe.
0.1 Ifama yomoya yaseMalpica
1 Ukunyusa amanye amandla ahlaziyekayo
1.1 Isicwangciso seBiomass Boost
2 Umbane wamanzi
3 Thatha ithuba lobushushu bomhlaba
Ifama yomoya yaseMalpica
Umnumzana Feijoo, uthathe ithuba lotyelelo lwakhe ukubeka ifama yomoya yaseMalpica njengomzekelo weprojekthi ebandakanya "ukuzibophelela kathathu": okusingqongileyo, umasipala - kuba ivumela ukudala imisebenzi kumabhunga ebhunga- kwaye, ekugqibeleni, iqinisekisa ukuzibophelela Izinto ezivuselelekayo, ukuba yipaki yesibini ukunika amandla kwakhona kule ndawo.
Ukunyusa amanye amandla ahlaziyekayo
Ayibalulekanga kuphela amandla omoya, iXunta izama ukukhuthaza amanye amandla ahlaziyekayo. Ngapha koko, eGalicia kukho imeko yemvula ephezulu kwaye, ngenxa yoko, amandla elanga akasebenzi kakuhle, wabeka isicwangciso sokuphucula amandla e-biomass. Iziphumo zokulinganisela kukuba Ekupheleni konyaka we-2017, ukufakelwa kwama-boiler e-biomass angaphezulu kwama-4.000 emakhaya kuya kube kuxhaswe.
Isicwangciso seBiomass Boost
Ngomgca wohlahlo-lwabiwo mali yezigidi ezingama-3,3 zeerandi, IXunta de Galicia ifuna ukukhuthaza ukufakelwa kwee-biomass boilers ukukhuthaza ukuveliswa kwamandla ahlaziyekayo kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwegesi engcolileyo kwiglasi engaphezulu kwama-200 oluntu, imibutho engenzi nzuzo kunye neenkampani zaseGalician.
Kuqikelelwa ukuba izibonelelo zokonga bonke abo baxhamla kwesi siCwangciso-qhinga ezinokufikelela kwi-3,2 yezigidi zeerandi kumthetho wonyaka wamandla, ngaphandle kwe-8 yezigidi zeelitha zedizili. Oku kuyakuba negalelo ekunciphiseni iitoni ezingama-24000 ze-CO2 kwiatmosfera.
U-Iberdrola wagqiba kunyaka ophelileyo ukwandiswa kwesakhiwo esikhulu samandla ombane eGalicia, emva kokugunyaziswa komzi mveliso omtsha waseSan Pedro II, yamiselwa ngumongameli wenkampani yombane, uIgnacio Galán, kunye nomongameli weXunta de Galicia, eSil Basin, eNogueira de Ramuín (Ourense).
Ukugunyaziswa kweli ziko kubandakanya ukwandiswa kwesakhiwo sombane seSanto Estevo-San Pedro, esenziwe ukusukela ngo-2008 nalapho 200 izigidi kwaye phantse bangama-800 abantu ababonelelwe ngengqesho.
Thatha ithuba lobushushu bomhlaba
Umhlaba waseGalician ucebile, uvelisa iintyatyambo ezizodwa kunye nokuma komhlaba, kodwa umhlaba ongaphantsi ukwahlukile kugcino lobutyebi, kuninzi lwendawo ukuchitha amaxesha. Ukongeza kwi-thermal potential, kufuneka songeze ubutyebi be-geothermal.
Ngokwezifundo ezininzi, iGalicia inokukhokelela inguquko entsha ekusetyenzisweni kwamandla ombane, hayi njengomthombo wobushushu kuphela kodwa nanjengomthombo wokuvelisa umbane.
Namhlanje i-geothermal yaseGalician sele iyinkokeli yesizwe. Ngokwedatha evela kwi-Acluxega (Umbutho weXeotermia Cluster yaseGalicia), uluntu ngo-2017, inani leenkqubo ezili-1100 ze umoya opholileyo ngempompo ubushushu. Eli nani, i-miniscule ukuba siyithelekisa namazwe aphambili ezwekazi laseYurophu, kodwa inani eliphambili kwinqanaba laseSpain.
Malunga namandla i-thermal efakiweyo iyonkeKwaqikelelwa ukuba ekupheleni konyaka ka-2016 eGalicia kwafikelelwa kwinani elimalunga ne-26 megawatts.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » IGalicia ifuna ukukhokela kwimveliso yamandla ahlaziyekayo eSpain
I-China ithatha ubunkokeli baseYurophu kumandla ahlaziyekayo
I-Pamplona iya kubonelela ngokuzisebenzisela ukuhlala ngokwesiqhelo